Kenya oo Dalbaneysa Dib u Dhigista Dacwada Badda ilaa 6 Bilood Oo Kale
September 30, 2019 F.G 0
Dowladda Kenya ayaa la sheegayaa iney qorsheyneyso dib ugu noqoshada maxkamadda cadliga adduuka ee ICJ si y helaan ilaa May sanadka dambe. mas’uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ku shaqada leh kiiska badda ayaa sheegaya in Kenya ay dooneyso in 6 bilood oo kale dib loo dhigo dhageysiga dacwada badda. Kenya ayaa ku andacooneysa inuu ku yaryahay waqtiga labada bil ah ee loogu daray horraantii bishan September. Bishan ayey aheyd markii ay maxkmadda 12 bil ka codsadeen laakin 2 bil la siiyey si loo dhageysto dacwada 4-ta November 2019. Xogtan oo weli ku kooban diblomaasiyiinta iyo dadka ku shaqada leh kiiskan ee labada dal ayaan ilaa hadda Soomaaliya la soo gaarsiin qoraal ka yimid ICJ oo sheegaya dalabka cusub ee Kenya. Dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda noo sheegtay iney diyaarisay jawaab ku haboon damaca iyo codsiga Kenya hadiiba ay warqad ka helaan ICJ, Muqdisho waxaa ay maxkamadda ICJ la wadaagi-doontaa sida Nairobi uga meermeerineyso tagista maxkamadda iyo in aaney daacad ka aheyn cudur-daaradda ay sheegeyso. Warar kale ayaa sheegayaa [Sii aqri]
Caruur Ku Geeriyootay Walxa Qarxa Oo Ka dhacay Degmada Cadale ee Hirshabelle
Wararka laga heleyo Degmada Cadale ee Gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in tuulo hoostagta degmdaas uu ka dhacay Qarax sababay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaraxaas ayaa waxaa uu ka dhashay Qori nuuca loo yaqaano Baasuke oo yaallay goob hawd ah oo ku taalla tuulada Ceel-muluq oo hoostagta Degmada Cadale, xili ay Caruur yar ku ciyaareysay. Qof kamid ah dadka deeganka ayaa sheegay in Caruurta ay dab ku qabteen Qoriga Baasukaha ahaa,hayeeshee markii dambe uu qarxay,waxaana halkaas ku geeriyootay saddex Caruur ah,halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Caruurta dhaawacantay ayaa waxaa loo soo qaaday dhanka Magaalada Muqdisho,halka qaarkood lagu dabiibayo Isbitaalka Guud ee Cadde ee Gobolka Shabeellaha Dhexe. Caruur badan ayaa horay dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay walxo qarxa oo ay ku ciyaarayeen deegaano ka tirsan Gobolada dalka.
Galmudug Oo Laga Cabsi Qabo In Looga Dhawaaqo labo Guddi doorasho iyo Khilaaf cusub oo bilowday
Maamulka Galmudug ayaa wajahaya Khilaaf cusub ka dib markii Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf uu si rasmi uga laabtay tilaabadii uu ugu wakiishay howlaha maamulka Galmudug Wasaaradda Arrimaha Soomaaliya. Khilaafka cusub ayaa ka dhashay hanaanka Awood qeybsiga beelaha maamulka Galmudug, Magacaabista Guddiga doorashooyinka Galmudug iyo soo xulista xildhibaanada maamulka Galmudug Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa la sheegay in faragalin kaga timid hanaanka soo xulista Odayaasha dhaqanka maamulka Galmudug, iyo ku dhawaaqista Guddiga doorashooyinka maamulka Galmudug. Sidda ay ilo xog ogaal ah ay xaqiijiyeen Dowladda Soomaaliya ayaa diyaarisay guddiga doorashooyinka maamulka Galmudug, waxaana sidoo kale Madaxweynaha Galmudug oo dhankiisa diyaariyay Guddi doorasho oo ka kooban 12 qof. Dowlada ayaa ku dhawaaqeysaa Guddi doorasho halka sidoo kale Madaxweyne Xaaf uu ku dhawaaqi doono Guddi doorasho. Madaxweyne Xaaf ayaa taageero ka helaya inta badan beelaha degan Mudug iyo Cadaado, waxaana laga yabaa Guddiga doorashooyinka Galmudug ee dhanka Xaaf in ay kasoo muuqdaan xubno Awood siyaasadeed leh. Galmudug ayaa qarka u saaran in ay yeelato Labo Guddi doorasho oo iska soo horjeedda waxaana dhammaan fashilmay dadaallo lagu xalinaayay Khilaafka Cusub [Sii aqri]
Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kaddib markii uu magaalada New York ee dalka Mareykanka uu kaga qayb-galay Kulanka 74-aad ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Madaxweynaha ayaa intii uu ku sugnaa waxa uu ka qayb-galay shir heer sare ah oo looga hadlayey arrimaha Soomaaliya, shir saddex geesood ah oo ay qayb ka ahaayeen dalalka Masar iyo Kenya iyo kulan doceedyo kala duwan oo uu la qaatay dhiggiisa dalalka Caalamka. Sidoo kale Madaxweynaha ayaa magaalada Washington waxaa uu xarigga kaga jaray dhismaha cusub ee loo iibiyay Safaaradda Soomaaliya ee Washington. Soo laabashada Madaxweyne Farmaajo ee Muqdisho ayaa ku soo aaday, iyadoo horaanta bisha October uu magaalada Muqdisho ka dhacayo shirka Madasha Iskaashiga Soomaaliya ee Somali Partnership Forum, kaasoo ah wajigiisa labaad shirkii ka dhacay sanadkii hore magaalada Brussels, waxaa shirka ka qeyb geli doona Madaxda Maamul Goboleedyada, Madaxda ugu sareysa dowladda Federaalka, wakiilada Beesha Caalamka iyo dalalka deeq bixiyeyaasha Sidoo kale dib ugu soo laabashada Muqdisho ee Madaxweyne Farmaajo ayaa ku soo beegantay, xilli [Sii aqri]
Qarax xooggan ayaa goor dhow ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo warar kaa duwan uu ka soo baxayo qaraxan oo ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay. Warar hordhac ah ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhacay agagaarka Kuliyadda Jaalle Siyaad, halkaasoo la sheegayo in kolonyo mareysay gaari qarax lagu weeraray. Qiic iyo uuro oo cirka isku shareeray ayaa laga arkayay goobo fog fog, waxaana wararku intaa ku darayaan in qaraxa ahaa mid aad u xooggan oo magaalada laga maqlay. Wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxa lagu weeraray Kolonyo Ciidamo talyaani la socdeen oo ka mid ah Ciidamada Midowga Yurub ee tababara ciidanka Soomaaliya. Sanadkii hore ayay aheyd markii sidan oo kale Kolonyo Ciidamada Talyaani la socdeen lagu weeraray meel aan sidaa uga fogeyn Kulyadda Jaalle Siyaad.
Faah Faahin Al-Shabaab oo weerar culus ku bilowday qaraxyo ku qaaday Garoonka Balli-doogle
Wararka Ayaa Sheegaya in Al-Shabaab Ay ku qaadeen Weerar ku bilowday qaraxyo xooggan ay ku qaadeen Garoonka Balli-doogle ee duleedka degmada Wanlaweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaasoo ay saldhig ku leeyihiin Ciidamo Mareykan ah, Ciidanka DANAB iyo Ciidan ka tirsan AMISOM. Sida wararku sheegayaan qaraxyo waa weyn oo ahaa gaadiid waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa laga maqlay dhanka Balli-doogle, sida ay soo warinayaan dadka deegaanka Wanlaweyn. Al-Shabaab ayaa qoraal ay barahooda Internet-ka ku qoreen ku sheegay in weerar culus ay ku qaadeen Saldhigga, ayna dagaalyahanadooda la wareegeen qeyb ka mid ah Garoonka Balli-doogle. Garoonka Balli-doogle ayaa ah saldhig Milateri oo ay isticmaalaan Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya, waxaana inta badan saldhigga ka kaca. diyaaradaha qumaatika u kaca iyo kuwa aan duuliyaha laheyn ee Drones-ka loo yaqaano. Dhanka kale wax war ah kama Soo Bixin Taliska Ciidamada Somaliya Iyo AMISOM
CiIdamada Puntland Oo Howlgal Ka Sameeyay Magaalo Xeebeedka Boosaaso
Ciidamada Booliska Maamulka Puntland ayaa howlgal lagu xaqiijinayay amniga waxaa ay xalay ka sameeyeen Magalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari, iyaga oo howlgalkaas lagu soo qabqabtay dad farabadan. Howlgalka ayaa ahaa mid lagu baarayay gadiidka iyo dadwaynaha qaybahooda kala duwan waxay sidoo kale Ciidamadu Waxa ay Gaadiidka ka fiiqayeen bacaha Madow ee gadiidka ku xiran ee bensolka loo yaqaaano,waxaana guud ahaan laga sameeyay Xaafadaha Magalada Boosaaso. Taliyaha qeybta Booliska gobalka Bari Xuseen Cali Maxamed ayaa sheegay in howlgalka ay sidoo kale kula dagaalamayeen Dhalinyarao xilliyada habeenkii dadka ka dhaca mobeelada,kuwaas oo cabashadooda ay kazoo gaartay Shacabka Magalada Boosaaso. Sidoo kale waxaa uu sheegay in howlgalka lagu soo qabqabtay labaatameeyo dad ah,kuwaas oo u badan dhalinyaro,isla markaana baaritaano lagu sameyn doono cidii dambi lagu waayana la siidaeyn doono. Magalada Boosaaso ee Gobolka Bari ayaa waxaa ay kamid tahay deegaannada ugu amniga Xun Magaalooyinka Puntland,waxaana mararka qaar ka dhaca dilal qorsheysan iyo qaraxyo lala eegto mas’uuliyiin ka tirsan Puntland,waxana weeraradaas mas’uuliyadooda sheegta Al-Shabaab.
Madaxweyne Xaaf oo ku dhawaaqay inuu dib ula soo noqday Mas’uuliyaddiisa Galmudug
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ku dhawaaqay inuu dib ula soo noqday wakaalashadii Maamulka Galmudug ee uu bishii July u Dhiibtay Wasaaradda arrimaha gudaha iyo Federaalka, si ay u daadihiso geeddi socodka dib u heshiisiinta iyo doorashooyinka Galmudug. War saxaafadeed uu soo saaray Madaxweyne Xaaf ayuu ku sheegay in dowladda Federaalka ay muddo 3 bilood natiijo la’aan la taaban karo ka sameyn weyday doorashooyinka. Madaxweeyne Xaaf ayaa caddeeyay inuu si degdeg ah u soo magacaabi doono Guddiyo kala duwan oo ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka, dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka Galmudug. Sidoo kale Madaxweyne Xaaf ayaa ugu baaqay Siyaasiyiinta Iyo waxgaradka Galmudug inay dhistaan Galmudug loo dhan yahay. Akhriso war saxaafadeedka.
SAWIR:Xarun tareenada Laga Raaco Dalka Sacuudiga Oo Dab Qabsaday
September 29, 2019 F.G 0
Wararka naga soo gaaraya dalka Sacuudiga ayaa sheegaya in dab xoog leh uu ka qabsaday xarun Tareen oo ku taalla magaalada Jiddah, iyadoo weli ay la tacaalayaan kooxaha Dab-damiska. Warbaahinta Sacuudiga ayaa shaacisay in Dabka uu qabsaday xarunta Tareenka Xarameyn ee magaalada Jiddah, gaar ahaan Xaafadda Suleimaniyah. Muuqaallo laga helay dabka ayaa muujinaya inuu yahay mid aad u xoog badan iyadoo ay hawada isku shareertay uurada iyo holaca ka baxaya dabkaas oo illaa hadda aan la ogeyn sababta dhalisay. Dabka qabsaday xarunta tareenka Xarameyn ee magaalada Jiddah ayaa la sheegay inuusan wax qasaare nafeed ah geysan, marka laga reebo burbur ku dhacay qeybo ka mid ah xaruntaas.
Dowladda Oo Shaacisay Sababta Sharciga Lagu siidaayay Ciise Tarabuun
Dowladda Soomaaliya ayaa si faa faahsan kaga hadashay Arinta Ciise Tarabuun,oo Dowladda Kenya ay sheegtay in ay doon dooonayaan ciidamada Amniga. War ka soo baxay Dowladda ayaa lagu sheegay in ay u arkaan Muwaadin maray ciqaabtii ay ku xukuntay Maxkamad ciidan. Ciidamada Booliska Dowlada Kenya ayaa waxaa ay ku dhawaaqeen in dalkooda uu soo galay Sarkaal ka tirsanaa Ururka Al-Shabaab,isla markaana ahaa Madaxii Amniyaadka Al-Shabaab ee Gobolkan Banaadir kaas oo lagu Magacaabo Cabdi Waaxid Ciise Khaliif Cabdi (Ciise Tarabuun), iyaga oo baahiyay Sawirkiisa. Booliska ayaa waxaa ay sheegeen in sarkaalkaas ay rumeysan yihiin in uu Kenya soo galay 24-kii Bishan September, waxaana ay dadka Kenya ugu baaqeen inay Ciidamada kusoo wargeliyaan hadii ay arkaan Shaqsigaas ay sawirkiisa baahiyeen. Wasiirka Wasaaradda Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow Ducaale ayaa 19-kii Bishii June ee sanadkii 2017 waxaa uu sheegay in Ciidamada Amniga howlgal ay ka fuliyeen Suuqa Bakaaraha ay gacanta ku dhigeen Madaxii Amniyaadka Al-Shabaab ee Gobolkan Banaadir Cabdi Waaxid Ciise Khaliif Cabdi (Ciise Tarabuun).